Waa Maxay Kolastarool? Dr Abdikarim D Hassan Qormada Labaad.
(Hadhwanaagnews) Wednesday, July 11, 2018 10:00:44
Tasi waxay keentaa in dhuuntii xididku yaraato oo dhiigii marilahaa hoos u dhaco. Arintani waxay caan ku tahay oo loo yaqaan erey bixinta
Khataraha uu Keeno kolastarool-ka Sareeyaa:
Marka kolastarool-ku heerkii dabiiciga ahaa ee loogu talo galay dhaafo, wuxuu fadhiistaa oo ku rasaysmaa gidaarka gudaha ee xididada dhiiga qaada. Waxa uu si gaar ah u jecelyahay halbowlayaasha wadnaha waraabiya ee looyaqaan (coronary arteries), kuwa maskaxda waraabiya(cerebral arteries), kuwa kelyaha waraabiya(renal arteries) iyo kuwa xubnaha darafyada waraabiya(Peripheral arteries) sida cagaha hoose.
Tasi waxay keentaa in dhuuntii xididku yaraato oo dhiigii marilahaa hoos u dhaco. Arintani waxay caan ku tahay oo loo yaqaan erey bixinta cilmiga ah ee (Atherosclerosis).
Marar badan waxa dhacda in kolastaroolkii xididka ku rasaysmay in uu qoomo oo nabar ku sameeyo dahaadhka
jilicsan ee u dhexeeya kolastarool-ka ururay iyo dhiiga xididka dhex socda. Halkaasna waxa ka dhalanaya nabbar ilma qabatay ah oo xididka gudaha kaga yaal. Nabarkaasi wuxuu soo jiitaa xinjiro, taasi oo sii dedejisa in xididku si buuxda u xidhmo.
Waxa dhacda in xinjirtaasi faliidhanto oo qayb yar oo ka midd ahi dhiiga raaco, kadibna ay xidho xididada aadka u yaryar ee waraabiya xubnaha muhiimka ah sida kelyaha, Indhaha, iyo gomodaha hoose, waa xaalad dawaynteedu adagtahay oo loo yaqaan (thrombo-embolism)
Xubintii dhuuntaasi waraabinaysay waxaa ku yaraanaya dhiigii gaadhayay, waanay oomaysaa. Waxa yaraanaya oksajiintii (oxygen) iyo nafaqadii (nutrients) ay helaysay, sidoo kale waxa ku ururaya qashinkii ka samaysmay shaqada ay qabanayso oo ay ugu badantahay uguna khatarsan tahay aysiidha loo yaqaan lactic acid.
Oksajiin iyo nafaqo la’aantaas iyo waliba aysiidha xubinta ku ururtay waxay keentaa xanuun uu qofku dareemo, gaar ahaan marka xubintaas shaqadeedu korodho ee ay u baahato oksajiin iyo nafaqo dheeraad ah.
Qofku wuxuu xannuunka ka dareemaa xubinta uu badh-xidhmay xididkii waraabinayay.
Tusaale; hadii uu badh-xidhmo xididka midd kamidda xididaha waraabiya wadna oo qofku waxooga howl saa’id ah qabto wuxuu xanuunka ka dareemaa laabta, gacanta midig iyo raqabada, waaa xaalad loo yaqaab (Angina Pain) oo sababteedu tahay qaybka midd ah wadnaha oo dhiigii waraabinayay yaraaday.
Hadii xididkasi wada xidhmo waxaa dhacaya in qaybtaa uu waraabinayay ay dhimato, waa xaalad khatar ah oo nolosha qofka khatar wayn gelinkarta.
Dhaawaca wadnaha soo gaadhayaa waxay ku xidhan tahay hadba inta uu leeg yahay xididka xidhmay iyo gurmadka caafimaad ee qofkaasi helo.
Hadii uu badh-xidhmo xidid ka midd ah kuwa maskaxda waraabiya, qofka waxaa ku dhaca wax looyaqaan faalij-yare ama mini-stroke( transient ischaemic attack), oo ah qayb maskaxda ka midd ah oo dhiigii ku yaraaday ama muddo yar uu ka xidhmay. Hadii xididkaasi si buuxda uu u xidhmo markaas waxaa ku dhaca faalij dhan ( stroke) oo aynu wada garan karno sawirkiisa iyo riiqdiisa.
Xaaladahan khatarta ah ee aynu magacownay waxay tusaale dhab ah u yihiin khatarta kolastaroolka aadka u sareeya. Waxaa xusid muddan in aan uu lahayn astaamo lagu garto oo laga hortagi karo. Musiibooyinkaasi waxay u dhacaan si kedis ah, mar danbe uunbaa la ogaadaa in qofkaasi muddo dheer qarsanayay kolastarool aad u sareeya.
Waxaa dhamaan khubarada caafimaadku isku waafaqsan yihiin in kolastaroolku yahay khatar dhalliyaha ugu muhiimsan ee xannuunada dhiig karka, faalijka, kelya-xannuunka, iyo xannuunka xididada darafyada( peripheral vascular disease).
Hadii kolastaroolku ku lammaanaado khatar dhaliyayaasha waawayn ee kale sida Macaanka, qiijinta sigaarka, dhiig-karta, buurnida; gaar ahaan buurni-calooleedda, da’da ka wayn konton jirka, kuwaas middkood ama in ka badani way sii toban jibbaaraan khatarta kolastaroolka ka dhalan karta.
Marka laga yimaaddo xannuunadaa waawayn kolastaroolku waxa kale oo uu saamayn wayn ku leeyahay indhaha, maqaarka, hammada raga iyo xaglaha jidhka.
Waa maxay kolastarool?
Qormada labaadDr Abdikarim D Hassan